Laacibka Aaron Ramsey oo dhaliyay gool caalamka ka yaabiyay
Wednesday December 10, 2014 - 11:46:20 in Sports by
Laacibka Aaron Ramsey ee ka tirsan kooxda Arsenal ayaa dhaliyay gool caalamka oo dhan ka yaabiyay, kaddib markii uu laaday kubbad sida biriqda oo kale ka dhex bixiyay shabaqa kooxda Balatasaray ee dalka Turkiga laga leeyahay.
Kubbadda uu ciyaaryahanka laaday Ramsey ayaa ka toogtay shabaqa goolka meel u jirta 30 yrds, taasi oo sababtay markii uu dhashay goolka inay si weyn ugu farxaan taageerayaasha kooxda Arsenal.
Dhinaca kale goobta uu ka dhaliyay goolka ciyaaryahanka Aaron Ramsey oo ahayd angal qaloocan oo ay dhif iyo naadir tahay in laga laado kubbad, ayaa arrintani waxay ku noqotay khabiirada K/Cagta mid ay si aad ah ula yaabaan.
Ciyaarta oo xalay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Galatasaray ayaa ku dhammaatay 4-gool oo Arsenal ku guuleysatay, iyadoo kooxdaani ay u gudubtay wareegga 16-aad ee tartanka UEFA Champions League.
Lafaha meydad laga helay Warsheekh oo muran badan dhaliyay (Warbixin).
26/07/2016 - 01:02:01